Xaq u yeelashada waxbarashada
Si jaamacadda ama kulliyadda jaamacadda loo dhigto, waa in aad soo buuxisaa shuruuddaha guud iyo shuruuddaha gaarka ah ee la isku qoro koorsooyin ama barnaamijka adiga aad dalbatay.
Shuruuddaha lagu galo ee guud
Dhammaan koorsooyinka iyo barnaamijyada waxaa jira shuruuddo qaar oo aassaasi ah. Haddii aad leedahay waxbarasho diyaar-gareyn ee dugsiga sare (gymnasieexamen) oo aad ka qaadatay dugsi sare ee Swedish (gymnasium) ama barnaamijka waxbarashada dadka qaangaarkah ee degmada, waxaad soo buuxisay shuruuddaha guud ee lagu galo ee waxbarashada sare ee Sweden dhexdeeda. Xitaa ardayda leh xirfad ama tababar ka haysta dugsi sare oo Swedish ama barnaamijka waxbarashada dadka qaangaarka ee keenay buundada (A-E) ee Swedish ama Swedish sida luqad labaad oo kale 2 + 3 iyo luqadda Ingiriis 6 waxay buuxiyeen shuruuddaha guud ee lagu galo waxbarashada tacliinta sare. Haddii ay kaa dhimman tahay xirafadda Swedish ama Ingiriiska, waa in aad barataa koorsooyinkan oo aad ku baastaa.
Haddii waxbarashada dugsiga sare aad ku soo dhammaysatay wadan kale oo waxbarashada dugsiga sarena aad soo dhammaysay wadankaaga, waxay u badan tahay Sweden dhexdeeda aad uqalanto haddiiba aad ka soo baxdo shuruuddaha afka Swedish ka, Ingiriiska iyo xisaabta.
Sidoo kale xaq u yeelashada waxaa kaloo ku aad ku heli kartaa adiga oo u mara wax loogu yeero 'reell kompetens' ama waxbarasho hore. Macluumaad dheeraad oo ku saabsan qiimayn barasho hore waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee iskuul kasta.
Shuruuddaha gaarka ah ee lagu galo
Koorsooyinka badankood, ardayda waxaa looga baahan yahay in ay soo bandhigaan aqoon hore. Tan waxaa loogu yeeraa xaq u yeelasho gaar ah Tusaale waxaa noqon kara barnaamijka injineerin ka, halkaasoo ardayda loogu baahan yahay in uu soo dhammaystay koorsooyinka xisaabta ee heerka sare iyo koorsooyinka sayniska kale. Koorsooyin iyo barnaamijyo qaar, tusaale ahaan maadooyinka farshaxanka, waxaa dhici karta in loo baahdo imtixaan gaar ah ama waayo aragnimo qoraal ah.
Ka waran haddii aanan ka soo bixi karin shuruuddaha?
Haddii aadan ka soo bixin shuruuddaha lagu galo ee gaarka ah ama midda guud, waxaa jira qaabab lagu heli karo. Macluumaad dheeraad waxaad ka heli kartaa iskuullada sare, xafiisyada waxbarashada dadka qaangaarka ah ee degmada iyo iskuullada sare ee [folk high schools]. Sidoo kale la taliyaha iskuulka ayaad kaalmo ka heli kartaa. Ka eeg folkhogskola.nu, studera.nu ama bogga internetka ee degmada si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Imtixaanka [Swedish Scholastic Aptitude Test]
Haddii aad ka soo baxdo shuruuddaha lagu galo, fursadda ah in laguu oggolaado kor ayaad u qaadi adiga oo gala Imtixaanka Swedish Scholastic Aptitude Test. Imtixaankan oo caamka ah sideed qeybood ayaa loo qeybiyay oo waxaa ku jira 160 su'aalood oo laka dooranayo. Maadooyinka oo dhan aannan ka ahayn garashada aqriska Ingiriiska waa luqadda Swedish ka, sidaa-awgeed wax wanaagsan in aad ka taqaano luqadda Swedish ayaa la iska doonaayaa. Maadooyinka la isku imtixaanno waa: xisaabta;barbardhigga xisaabta; taswiirro wax lugu bayaaninayo, shaxan iyo qariido; macluumaad ku filan; fahamka aqriska Ingiriiska; fahamka aqriska Swedish; kalmaddaha Swedish ka; iyo jumlad dhamaystirka.
Imtixaanka sannadkii laba jeer ayaa la qabtaa oo ilaa i inta aad jeceshahay ayaad gali kartaa. Natiijadaada imtixaanka ilaa iyo 5 sanno ayay jiriyaan. Waad dalban kartaa oo waxaad dhammaystir kartaa meelaha koorsooyinka iyo barnaamijyada iyadoo lagu salaynayo fasaladaada iyo natiijooyinka imtixaanka, sidaa-awgeed wax kaa lumaayo ma jiro oo imtixaanka gal. Macluumaad ku saabsan imtixaankan oo (Swedish) ah, oo ay ku jiraan dukumentiyada arjiga, kala soo bax www.hogskoleprov.nu. Macluumaad ku qoran af Ingiriis oo imtixaanka ku saabsan, fadlan ka eeg studera.nu.